एमालेको चुनावी तालिका, ओली र रावलबीच प्रतिस्पर्धा - Web Tv Khabar
२०७८, माघ १५ गते शनिवार
# शिक्षक सेवा आयोग
# सामुदायिक विद्यालय
# शिक्षा मन्त्रालय
एमालेको चुनावी तालिका, ओली र रावलबीच प्रतिस्पर्धा
मंसिर १३, २०७८ सोमवार ०७:४७ बजे
चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औँ महाधिवेशनका अन्ततः निर्वाचन हुने भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वसम्मतबाटै नयाँ पदाधिकारीको टुंगो लगाउने चाहे पनि उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल चुनावमा उत्रिने भएका हुन् ।
ओलीले आइतबार राति आफ्नो नेतृत्वमा १९ पदाधिकारीको नाम घोषणा गरेका थिए । तर, यसअघि नै अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावलले र पदाधिकारीमा नसमेटिएका भुसालले उपाध्यक्षमा चुनाव लड्ने बताइरहेका छन् ।
एमाले निर्वाचन अयोगले आज बिहानका लागि चुनावको कार्यक्रम तय गरेको छ । आज बिहान ८ बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाका अनुसार बिहान साढे १० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने बिहान पौन ११ भित्र उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ । बिहान १०ः५० बजे उजुरीउपर छानबिन र निर्णय हुने कार्यतालिका छ ।
बिहान ११ः५५ देखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ भने १२ः५ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । आज साँझ ९ बजेदेखि मतदान सुरू हुने कार्यतालिका तय भएको छ । मतदानको समय मंगलबार बिहान ३ बजेसम्म तय भएको छ ।
# नेकपा (एमाले)को १०औँ महाधिवेशन
संघीय कानुन आएपछि शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ
बिहान बसेकाे सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष बिहीन, आजै पुनः बस्ने
सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरु
ट्रयाक्टरले किचेर दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु
सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ सम्मानित
नागरिकता नहुँदा बैंक खाता खोल्नदेखि वृद्धभत्ता पाउँन समेत सकस
१५ गतेदेखि विद्यालय खोल्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय
शिक्षक सेवा आयोगले जारी गर्यो यस्तो सूचना, परीक्षा के होला ?
कर्मचारीलाई बिदा दिन आग्रह
स्थायी शिक्षक : कतिले दिए आवेदन ?
सरकार भन्छ- इसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई साउनदेखिकै बाँकी तलब दिन्छौं
कर्मचारीको जागिर चैट !
लेखापाललाई २१ हजार तलब इसीडी शिक्षकलाई १५ हजार पाँच सय